4K သည်က Ultra HD ကို Blu-ray player ကစားသမားများနှင့် Disc တွေမှာတော့ - သင်တစ်ခုခုကိုသိထားဖို့လို | | OS ကို-STORE ဘလော့ခ်
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 10, 2018 admin ရဲ့ ကွန်ပျူတာ, အသက်, OS ကို-STORE, OSGEAR ပံ့ပိုးမှု, ထုတ်ကုန်များ, သိုလှောင်ခြင်း, နည်းပညာ 0
သင်တစ်ဦး 4K Ultra HD TV ကိုဝယ်ယူင့်ဆိုပါက, သငျသညျအစကအပေါ်စောင့်ကြည့်ဖို့အချို့သော 4K content ကိုလိုခငျြ. ပိုများသောအကြောင်းအရာများကိုကမ်းလှမ်းနေပါသည်, Netflix နဲ့တူသောက်ဘ်ဆိုက်များကနေတချို့ streaming များအပါအဝင်, VUDU, နှင့် Amazon. တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ, ပို. ပို. ခေါင်းစဉ် 4K Ultra HD Blu-ray Disc တွေမှာတော့အပေါ်ဖြန့်ချိလျက်ရှိ. ဒါပေမယ့် 4K Blu-ray Disc တွေမှာတော့ကစားရန်, you’ll have to invest ina4K Blu-ray Disc player.
Blu-ray player နှင့် 4K Ultra HD Blu-ray Disc တွေမှာတော့အကြားကွာခြားချက်များ >>>
ညီမျှခြင်း၏ disc ကိုအခြမ်းတွင်, 4K သည် Blu-ray5လက်မအရွယ်တူအောင် (12စင်တီမီတာ) 50Blu-ray disc ကို format နဲ့များတွင်အသုံးပြု GB ကို dual-layer ကိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ discs တွေကို, ဒါပေမယ့် 4K Blu-ray disc format နဲ့တစ်ဦး 66GB ၏ dual-layer ကိုစွမ်းရည်မြှင့်ခြင်းနှင့်သုံးဆအလွှာ 100GB စွမ်းရည်ရှိပါတယ်. 4K သည်ကိုဗီဒီယိုအချက်ပြသည့် H.265 / HEVC format နဲ့ encoded နှင့် discs တွေကိုအပေါ်သိမ်းဆည်းထားသည်, အဆိုပါ discs တွေကိုအပေါ်ရရှိနိုင်သောအာကာသသို့ 4K ကိုဗီဒီယိုဒေတာကိုချုံ့နိုင်သည့်.
ဒါကတစ်ဦးက Ultra HD ကို Blu-ray disc အပေါ်ပိုပြီးသိုလှောင်မှုညှစ်နိုင်ရန်အတွက်ဆိုလိုသည်, အဆိုပါသိမ်းဆည်းထားဗွီဒီယိုနဲ့အသံသတင်းအချက်အလက်သိပ်သေးငယ်ဖြစ်ရန်ရှိသည်, ရာသူတို့တစ်တွေစံ Blu-ray disc ကစားသမားအားဖြင့်ဖတ်ပါမရနိုင်ဆိုလိုတယ်.
အဘယ်ကြောင့်နောက်ထပ် Disc Format ကိုကျနော်တို့လွှဖူးလိုက်တဲ့အခါ >>>
အင်တာနက် streaming များခုန်-and ဘောငျသဖြင့်စိုက်ပျိုးခဲ့ပေမဲ့, အမြဲတမ်းဆဲအကောင်းဆုံးရွေးချယ်စရာမဟုတ်ပါဘူး. ဥပမာ, 4K content တွေကိုစီးဆင်းနိုင်ရန်အတွက်, သငျသညျကိုအနည်းဆုံး 15Mbps တစ်ဘရော့ဘန်းမြန်နှုန်းလိုအပ်ပါတယ် (တစ်ဦး Netflix နဲ့ထောက်ခံချက်) နှင့်, ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျး, ဘရော့ဒ်ဘန်းတဲ့ subscribers တွေအများကြီးထိုကဲ့သို့သောအမြန်နှုန်းမှဝင်ရောက်ခွင့်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး. တကယ်တော့, ဘရော့ဘန်းမြန်နှုန်းဟာ U.S န်းကျင်ကျယ်ပြန့်ကွဲပြား. 1.5Mbps သကဲ့သို့အနိမ့်ရာမှ 100Mbps သကဲ့သို့မြင့်မားရန်, အရာအများအပြားစားသုံးသူပင် 1080p content တွေကိုစီးဆင်းပေးဖို့မြန်နှုန်းရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးဆိုလိုသည်, ကုန်အံ့တစ်ဦးတည်း 4K. ဒါပေါ့, မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းမှဝင်ရောက်ခွင့်နှင့်အတူ, ပိုမိုမြင့်မားသောကြေးပေးသွင်းစျေးနှုန်းများလာ.
စိတျထဲမှာထားရန်နောက်ထပ်အချက်တစ်ချက်အင်တာနက်ပေါ်ပေမယ့်ကိုရယူသုံးအကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ် “ဝယ်လိုအားအပေါ်,” သင့်ရဲ့တပ်မက်လိုချင်သောအကြောင်းအရာကအမြဲရှိလိမ့်မည်ဟုအာမခံချက်မရှိပါ. ဥပမာ, Netflix နဲ့အဆက်မပြတ်အဟောင်းများနှင့်၎င်း၏အွန်လိုင်းကက်တလောက်ထဲကနေလျော့နည်းကြည့်ရှုအားပေးအကြောင်းအရာသုတ်သင်ရှင်းလင်း, ဒါကြောင့်သင်အကြိုက်ဆုံးရုပ်ရှင်သို့မဟုတ်တီဗွီရှိုး၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမိတ္တူရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးလျှင်, သငျသညျတစ်နေ့နေ့မှာကံကောင်းပါစေထဲကဖြစ်နိုင်သည်.
အများဆုံး Blu-ray disc ကစားသမားသည်ယခုအခါအင်တာနက် streaming များထည့်သွင်းကတည်းက, တစ်ဦး 4K Blu-ray player မှအဆင့်မြှင့် Disc player ကိုဖွင့်အကြောင်းကိုအားလုံးရရှိနိုင် disc ကိုကို formats ဝင်ရောက်ဖို့တစ်ပလက်ဖောင်းနှင့်အတူစားသုံးသူပေးသွားမှာပါ (4K သည် Blu-ray player, Blu-ray player, ဒီဗီဒီ, CD ကို) နှင့်အင်တာနက် streaming များ, built-in ပါပွီမအင်တာနက်ကို streaming High-end က Ultra HD ကို Blu-ray disc ကစားသမားတစ်ဦးကိုရွေးချယ်အရေအတွက်ကိုရှိပါတယ်ပေမယ့်, ရရှိမှုစမတ်တီဗီများနှင့်ပြင်ပမီဒီယာ streamers ဒီ feature မလိုအပ်တဲ့စေသောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးချဉ်းကပ်တာ.
သင်သည်လည်းအင်တာနက် streaming များစွမ်းရည်ထည့်သွင်းမယ့်ကစားသမားကိုအလွန်လိုချင်သောစိတ်ပါလျှင်, သငျသညျဝယ်ခင်ဤအင်္ဂါစစ်ဆေး.
ဘယ်လိုအသိအမှတ်ပြု 4K Blu-ray Disc နဲ့ Drive ကိုမှ >>>
4K သည် Blu-ray Disc တွေမှာတော့မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် 4K အမှတ်တံဆိပ်များ ; 4K သည် Drive သို့မဟုတ်ကစားသမားလည်း UHD အမှတ်တံဆိပ်များ, ကက Ultra HD ကိုဆိုလိုတယ်. 4K ကိုဗီဒီယို join ဖို့မှန်ကန်သော Drive နှင့် disc ကိုရှေးခယျြပါ.
ပိုများသော Blu-ray သတင်းအချက်အလက်များ, ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ.
Blu-ray player ကို
64-နည်းနည်းက Windows Technology_Internet HTC က ဥပဒေရေးရာအနက် နည်းပညာ OS ကို-STORE စီပီယူ စီးရီးယာဉ်မောင်းပံ့ပိုးမှု စက်ပစ္စည်းကိရိယာမန်နေဂျာ device ကိုမော်ဒယ် Samsung က processor ​​ကို Intel က ပြည်သူ့ရည်ရွယ်ချက် ကားမောင်းသူထောက်ခံမှု ပရိုဆက်ဆာ မိုဘိုင်းဖုန်း HD Graphics Nokia က Software များ
HTC က Samsung ရဲ့ Galaxy Intel က မိုဘိုင်းဖုန်း စမတ်ဖုန်းများ ပြည်သူ့ရည်ရွယ်ချက် စီးရီးယာဉ်မောင်းပံ့ပိုးမှု processor ​​ကို ဥပဒေရေးရာအနက် Intel က Server ကို 64-နည်းနည်းက Windows Nokia က ကားမောင်းသူထောက်ခံမှု Sony Ericsson က နည်းပညာ Qualcomm မှ စီပီယူ Software များ device ကိုမော်ဒယ် စက်ပစ္စည်းကိရိယာမန်နေဂျာ ပရိုဆက်ဆာ OS ကို-STORE Samsung က HD Graphics Technology_Internet